Tsy maintsy miteny ve, manoloana olona mijaly? (1)
"Ny ranomasoko no fiahiko andro aman’alina, amin’ny anaovany ahy mandrakariva hoe: Aiza izay Andriamanitrao?" Salamo 42:3
"Fa Ianao, Jehovah Tompo ô, miasà ho ahy noho ny anaranao; vonjeo aho, fa tsara ny famindramponao. Fa mahantra sy malahelo aho, ary ny foko dia voatsindrona ato anatiko." Salamo 109:21-22
Ahoana no hanazavana ny atao hoe fijaliana, raha tsy izy ihany no avela hanambara tena? Ahoana no fomba ilazana azy, rehefa tena mafy izy ka mahatonga antsika ho sina? Misy mihevitra fa ny kristiana dia manam-pahaizana manokana, raha hikabary momba ny fijaliana. Tsy mora tokoa amin’izy ireny ve ny mahita teny efa vonona hanazavana izany?
Raha ny marina, ny Baiboly dia tsy mitady ny hamaritra ny fijaliana mba ho takatra ara-tsaina fotsiny. Ireo olona mijaly no resahiny, ary indrindra i Kristy, Izay “nitondra ny aretintsika … sady nivesatra ny fahoriantsika” (Isaia 53:4). Tsy misy fampahoriana tsy natao tamin’Ilay Zanak’Andriamanitra, Ilay “lehilahy ory”. Nefa na dia nohomboana teo amin’ny hazofijaliana aza Izy, dia nivavaka ho an’ireo namono azy, hoe : “Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony” (Lioka 23:34).
Fa ao amin’ny Baiboly dia tsy misalasala Andriamanitra mampiseho -amin’ny tantaram-piainan’ny rehetra, na lahy na vavy, na tanora na antitra- ny zanak’olombelona mitolona amin’ny fahoriana. Asehon’ny Baiboly koa izay mahatonga izany, dia ny herisetra, ny fivadiham-pitokisana, ny fanamavoana, ny fankahalana, ny maha irery dia irery, ny aretina, ny ratram-panahy rehefa mangozohozo mila hianjera.
Araka izany, ny Baiboly dia miresaka ilay fijaliana mampiantsoantso, mampitoloko, mampametraka fanontaniana hoe: “Aiza àry Andriamanitra?”, ary mampanongilan-tsofina mafy, eo am-piandrasana valiny avy aminy. Misy boky iray manontolo, ao amin’ny Baiboly, mitantara ny fitsapana an’i Joba. Nipololotra avy tao am-pon’io mpino io ny antsoantsom-pijaliana, fijaliana izay saika nitarika azy hikomy. Dia naneho ny tenany tamin’i Joba Andriamanitra, mihoatra lavitra noho izay azony natao hatrizay.